Waa tuma Wasiir Hinda Jaamac Xirsi (Hinda Gaani)?. W/Q:- Aadan Cali Bile
Wednesday 3rd January 2018 09:05:13 in Aragtida Dadweynaha by Xafiiska Sare
Hinda Jaamac Xirsi, oo uu madaxweynaha JSL dhowaan u magacaabay Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshadu dhan kasta oo laga eego ba waa shakhsi ku habboon Wasaaradda xilkeeda loo igmaday ee ay wasiirka ka tahay. Iyada oo hore u soo noqotay xoghayaha Arrimaha Bulshada ee Xisbiga mucaaradka ah ee WADDANI, madaxweynuhuna uu ka duulayo waxa afka qalaad loo yaqaan (write person write position) oo ah in boos kasta loo magacaabo shakhsi ku habboon, ayaad durba halkaa ka garan kartaa inay tahay masuul aan lagula khaldamin jagadaa loo magacaabay. Waa shakhsi aanay dadka reer Somaliland u kala sokayn oo uu ilaahay ku galladay karti iyo dal jacaylnimo. Marwo Hinda Gaani waa Wasiirkii ugu horreeyay ee durba fuliya barnaamijkii uu xisbiga Kulmiye ummadda u ballan qaaday xilligii ololaha lagu jiray, sidoo kale waa wasiirka shaqadii qaranka ugu hor bilaabay, iyada oo ugu horraynba shaqaalihii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ku amartay in la nadiifiyo guud ahaan ba xayndaabka xarunta, weliba aan hawshaa shaqaalaha kaga tegin, balse kala qayb qaadatay iyada oo xaaqinka qashinka daba haysatay oo aanuu ku jirin kibir iyo islaweyni. Waxay si lama filaana ugu kuur gashay xaaladda derbi jiifka ku nool magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka. Muddo 26 sano ah oo uu qarankani ku naalloonayo xasillooni iyo kala dambayn waxay dib usoo noolaysay rajadii ay caruurta derbi jiifka ahi ka qabeen mustaqbal wanaagsan oo ay maruun helaan, kaddib markii ay marwo Hindi caruurtaa la qaybsatay dhaxanta iyo dhedada ka dhacaysa Hargeysa, isla markaana ay ballanqaadyo iyo dhiirrigelin kala kulmeen Wasiirka oo si qoto dheer u waraysatay uguna kuur gashay xaaladda nololeed ee ay caruurtaasi ku jirto.
Maamo Hinda Jaamac Xirsi, dadnimada iyo dal iyo dad jacaylka ay cokantahay ka sokow, waa shakhsi khibrad iyo waayo aragnimo ku filan u leh maammulka dawliga ah (Public administration). Tiroba dhawr xil oo kala duwan ayay soo qabatay ka hor xilkan wasiirnimo ee imika loo magacaabay. Waxay hore u soo noqotay agaasimaha maamulka ee waaxda iibka wakaaladda biyaha Burco, xilkaas oo ay markii dambe iskeed uga tagtay ama ay iska casishay. Waxay ka mid ahayd tiirarka ugu adag ee ay wakaaladdu ku qotonto. Sidoo kale gu'gii 1983-kii waxay ka soo shaqaysay mashaariicda biyo gelinta ee wakaaladaha biyaha Burco iyo Muqdisho. Imikana waa Wasiirka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ee JSL.
Wasiirka cusub waxaan kula talinayaa sida imikaba ka muuqata inay daacaddaa u sii ahaato dalkeeda oo aanay marnaba xagal daacin caqabadaha ay leedahay shaqada qaranku. Waa lagu maagayaa ee waa inaad yeelataa samir iyo dulqaad ka adag qolofta diinka.
Faysal Cali Waraabe Oo Ka Mid Noqday Dawladda Soomaaliya Iyo Shir Uu Yurub Kaga Qeyb Galayo
Maayirka Degmadda Caynaba Oo Fariimo Digniin Ah U Diray Dadka Seerayaasha Sharci Daradda Ah Samaysta Iyo Codsi Uu U Dira
Xisbiga Mucaaradka Ah Ee Waddani Oo Soo Xidhay Tartan Kubadda Cagta Ah Oo Lagu Xusaayay Wasiirkii Hore Ee Xukuumadii Daa
[Daawo:-] Maamulka Degmadda Burco Oo Bilaabay Dhismaha Labo Garoon Oo Cusub Oo Laga Hir-Gelinaayo Xaafadda Maxamed Cali
Ex- Wasiir Caddaani Oo Ka Hadlay Sida Uu U Arko Kulankii Madaxweynaha Iyo Siyaasi Buubaa [Gudaha Ka Eeg]